Posted by သက်ဝေ at 9:55 PM
မောင်မျိုး October 9, 2010 at 10:01 PM
ထပ်တူဆုတောင်းသွားပါတယ် အစ်မရေ ခြောက်သွေ့မှုတွေကြားမှာ အေးချမ်းပါစေလို့ ။
:P October 9, 2010 at 10:05 PM
မသက်ဝေတောင်းပေးတဲ့ဆု ကိုကြီးကျောက်မှာ ပြည့်ပါစေ.................။
ဖြူ October 9, 2010 at 10:07 PM
အခြေအနေလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လိုက်တာ... အတူတူ ဆုတောင်းသွားတယ်...ကျေးဇူး သက်ဝေ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 9, 2010 at 10:30 PM
ကိုယ့် ညီငယ်နှမငယ်များက ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းကြ တာ ကြားရ မြင်ရ ဖတ်ရတော့ ဝမ်းလဲသာတယ်..ဝမ်းလဲနည်းတယ်...
Steve Evergreen : "very artistic. like it"
T T Sweet October 9, 2010 at 11:17 PM
သူငယ်ချင်း အန်တီ သက်ဝေနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ ပုံထဲကလို ကိုကြီးကျောက် စိမ်းလန်းနိူင်ပါစေ။ အေးချမ်းပါစေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 10, 2010 at 2:53 AM
ခုလိုဘဲ အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မြင်ချင်ပါသေးတယ်
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ October 10, 2010 at 4:04 AM
Heartmuseum October 10, 2010 at 5:37 AM
ခြောက်သွေ့မှုတွေ ကြားထဲက စိုပြေ စိမ်းလန်းခြင်း တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါစေ...
I'mafan of "Ko Gyi Kyauk", deeply sorry to hear the news. All my prayers are with you, wishing you have an easy journey!
ဇွန်မိုးစက် October 10, 2010 at 9:34 PM
မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့တရားမှန်း သိနေပေမယ့် ခုလိုသိရကြားရပြန်တော့ ရင်ထဲမကောင်းပါဘူး။း( ကိုကြီးကျောက်ဘလော့မှာတော့ သွားရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကိုကြီးကျောက်အတွက် အစ်မနဲ့ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
စုချစ် October 11, 2010 at 1:03 PM
အမလိုပဲ ထပ်တူထပ်မျှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
မိုးငွေ့...... October 12, 2010 at 6:23 PM
ပုံထဲကလိုပဲ ကိုကြီးကျောက် အမြဲ စိမ်းလန်းပျော်ရွှင်ပါစေ